Chii chinonzi refractive surgery | Bezzia
Chii chinonzi refractive surgery?
Tony Torres | 13/05/2022 14:00 | Matipi ehutano, Zvirwere
Kwemamwe makore, vanhu vane matambudziko ekuona vave vachikwanisa kushandisa refractive kuvhiyiwa kuvaruramisa uye kubvisa magirazi kana kuonana lenzi zvachose. Refractive surgery inoumbwa neboka rekupindira kana maitiro ekuvhiya ayo mamwe matambudziko anokonzera kuchinja kwekuona anogadziriswa kana kubviswa. Somuenzaniso, myopia, astigmatism, hyperopia uye kunyange nhasi presbyopia inogonawo kugadziriswa.
Rubatsiro rwese kune vanhu vanoda, vanoda kana vanoda kurega kupfeka magirazi, kungave nekuda kwehunyanzvi, mitambo kana kungoita zvikonzero zvekunaka. Nokuti magirazi akanaka kwazvo, anonakidza anowedzera hunhu kune chiso, asi kune isu tose tinofanira kuzvipfekedza zuva rega rega, hazvisi chimwe chiyeuchidzo chekuti pasina ivo, takarasika.
1 refractive operation
1.1 Laser refractive kuvhiyiwa, LASIK kana PKR
1.2 An intraocular lens inogonawo kushandiswa
1.3 Ndinoziva sei kana ndichigona kuvhiyiwa?
Kune marudzi akasiyana ekuvhiya refractive kugadzirisa matambudziko ekuona. Muchiitiko chega chega, ichange iri nyanzvi inosarudza kuti ndeipi inonyanya kukodzera uye kunyange nzira inopfuura imwe chete inogona kushandiswa panguva imwe chete mumunhu mumwe chete. Next tinokuudza ndedzipi mhando dzekuvhiya refractive, padzinoshandiswa uye kuti nzira yacho inoitwa sei.
Laser refractive kuvhiyiwa, LASIK kana PKR
Kana iyo laser inoshandiswa kugadzirisa shanduko yeziso iyo inokonzeresa matambudziko ekuona, chave pedyo kugadzirisa chimiro che cornea kuitira kuti ma diopters anodzivirira kuona chaiko agadziriswe. Chimiro chinogona kusiyana zvichienderana nekupedza kudzidza wemurwere wega wega, semuenzaniso, kana uchishandisa nzira yeLASIK, kupindira kunotevera kunoitwa.
Kugadzirisa myopia: chinoitwa kudzikamisa curvature nelaser, saka mwenje unonangana necornea.
Munyaya ye hyperopia: Muchiitiko ichi, mipendero yecornea inoumbwa kugadzira curve.
nokuda kwe astigmatism, chinoitwa ndechekuita kuti nzvimbo yacho iite sandara negondo guru rekonea kuti risiye seyunifomu sezvinobvira.
Panyaya yezvinonzi PKR refractive kuvhiyiwa, maitiro zvakafanana asi kazhinji zvinoshungurudza murwere. Yakanga iri nzira yekutanga yakashandiswa kugadzirisa matambudziko ekuona, saka nhasi yakagadziridzwa zvakanyanya uye nekudaro haichashandiswa kakawanda.
An intraocular lens inogonawo kushandiswa
Mune zvimwe zviitiko, pachinzvimbo chekushandisa laser kugadzirisa cornea nekuvandudza kuona, lens inogona kuiswa kana lens inogona kubviswa, zvichienderana nezvinodiwa nemurwere wega wega. Iyi ndiyo nzira inowanzoshandiswa kana murwere ane ma diopters akawanda kupfuura anobvumirwa kuita refractive laser surgery. Panyaya yekuiswa kwe lens, iyo lens inochengetwa. Mune zvimwe zviitiko, lens inobviswa uye an aphakic lens inosimwa, iyo ndiyo nzira inoshandiswa kubvisa cataract.
Ndinoziva sei kana ndichigona kuvhiyiwa?
Kukwanisa kuvhiya refractive kana uchida kugadzirisa kukanganisa kwekuona, senge myopia, astigmatism kana hyperopia, murwere anofanira kusangana nemamwe maparameter. Kune rimwe divi, kupedza kudzidza kunofanira kunge kwakagadzikana kweanenge makore maviri. Mamwe maparamita ekuchengetedza anofanirwa kuongororwa nenyanzvi mune yega yega inoongororwawo.
Nzira yakanakisa yekugadzirisa kusahadzika kwako kwese kuenda kunoonana nenyanzvi inogona kuita wongororo uye kutsanangura zvaunogona kuita. Sezvo kune akawanda ma paramita anoongororwa mune imwe neimwe nyaya, zvinodikanwa zvemurwere wega wega uye mukana wekuwana mhedzisiro inodiwa zvinogonawo kusiyana mune yega yega. Uyezve, Kunyangwe iri kuvhiyiwa kwakachengeteka, hakusi pasina mhedzisiro. iyo inofanirawo kukosheswa. Nguva dzose zviise mumaoko akanaka, gadzirisa kusava nechokwadi kwose. Siya imwe nguva yaunogona kuratidza uye kusarudza kuti riinhi, sei uye nani waunoda kuvhiyiwa kuti ubvise matambudziko ekuona zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvirwere » Chii chinonzi refractive surgery?
Kuchekwa-chekwa kuri kuita kudzoka muzhizha rino